Dhul gariir aad u xoogan oo ka dhacay Sweden | Somaliska
Dhul gariir cabirkiisu dhanyahay 4.2 ayaa xalay saacadu markay ahady 23:00 ka dhacay gobalka Norrland qaasatan waxaa laga dareemay ilaa magaalada Piteå, Luleå iyo Umeå,.ayadoo aan dad ku dhaawacmin ayaa hadana awooda dhul gariirka uu ahaa mid culus.
Dhulgariirka ayaa lagu tilmaamay mid aad xoogan, iyadoo dhowrkii sanaba mar uu ka dhaco waqooyiga Sweden. Björn Lund oo ah khabiir ku taqasusay dhul-gariirka oo wax ka dhiga jaamacada Uppsala ayaa sidaa SVT u sheegay.
Booliska ayaa waxaa soo wacay dad badan oo cabsi qaba, ka dib markii ay guryaha bilaabeen in ay ruxdaan. Ilaa hadda lama soo sheegin cid wax ku noqotay dhulgariirka ka dhacay waqooyiga Sweden.